General mazwi uye mamiriro ekutenga: B2B - Law & More B.V.
Blog » General mazwi uye mamiriro ekutenga: B2B
General mazwi uye mamiriro ekutenga: B2B
Sa muzvinabhizimusi iwe unopinda muzvibvumirano nguva dzose. Zvakare nemamwe makambani. Kazhinji mazwi nemamiriro ezvinhu zvinowanzo kuve chikamu chechibvumirano. Iwo akajairwa mazwi uye mamiriro anodzora (zviri pamutemo) zvidzidzo izvo zvakakosha muchibvumirano chose, senge yekubhadhara mazwi uye zvikwereti. Kana iwe, sa muzvinabhizimusi, iwe ukatenga zvinhu uye / kana masevhisi, iwe unogona zvakare kuve neyakagadziriswa mamiriro ekutenga. Kana iwe usina izvi, unogona kufunga kuzvidhonza. Gweta kubva Law & More uchafara kukubatsira neizvi. Iyi blog inokurukura akakosha ezviitiko zveyakajairika mamiriro uye mamiriro ekutenga uye icharatidza mamwe mamiriro ezvimwe zvikamu. Mune yedu blog 'General mazwi uye mamiriro: zvaunofanira kuziva nezvazvo' iwe unogona kuverenga zvimwe zvakajairika ruzivo nezve zvakajairwa mazwi uye mamiriro uye ruzivo rwunofarira vatengi kana makambani anotarisa kune vatengi.
Ndeapi akajairwa mazwi uye mamiriro?
Kazhinji zvirevo nemamiriro ezvinhu zvinowanzo zvine zvirevo zvakajairika zvinogona kushandiswa zvakare pachibvumirano chose. Muchibvumirano pachezvayo mapato anobvumirana pane izvo zvavanotarisira kubva kune mumwe nemumwe: zvibvumirano zvepakati. Chibvumirano chega chega chakasiyana. Izvo zvakajairika mamiriro anoisa pasi izvo zvirevo. Mazwi akajairwa uye mamiriro akaitirwa kushandiswa kakawanda. Unodzishandisa kana uchigara uchipinda muchibvumirano chimwe chete kana uchigona kudaro. Kazhinji mazwi nemamiriro ezvinhu zvinoita kuti zvive nyore kwazvo kupinda muzvibvumirano zvitsva, nekuti dzinoverengeka (zvakajairwa) zvidzidzo hazvifanirwe kuiswa pasi nguva dzese. Mamiriro ekutenga ndiwo mamiriro anoshanda pakutengwa kwezvinhu nemasevhisi. Ichi chirevo chakakura kwazvo. Mamiriro ekutenga saka anogona kuwanikwa mumhando dzese dzezvikamu senge indasitiri yekuvaka, yehutano chikamu uye mamwe masevhisi masevhisi. Kana iwe uri kushingaira mumusika wekutengesa, kutenga ichave iri yezuva racho. Zvichienderana nerudzi rwebhizinesi rinoitwa, akakodzera mazwi akajairwa uye mamiriro anoda kutorwa.
Paunenge uchishandisa mazwi akajairwa nemamiriro, zvinhu zviviri zvakakosha zvakanyanya: 1) ndeapi magariro nemamiriro ezvinhu anogona kukumbirwa, uye 2) chii chinogona uye chisingakwanise kudzorwa mune zvakajairwa mamiriro uye mamiriro?
Inodenha yako wega general mazwi uye mamiriro
Kana paine kupokana nemutengesi, unogona kuda kuvimba nemamiriro ako ekutenga. Kunyangwe iwe uchigona kunyatsovimba navo zvinoenderana nehuwandu hwezvinhu. Chekutanga pane zvese, zvakajairwa mazwi uye mamiriro anofanira kuziviswa anoshanda. Ungazvizivisa sei kuti zvinoshanda? Nekutaura muchikumbiro chekotesheni, odha kana odha yekutenga kana muchibvumirano chaunoshambadza mamiriro ako ese ekutenga anoshanda pachibvumirano. Semuenzaniso, unogona kusanganisira chirevo chinotevera: 'Mamiriro ekutenga akawandisa e [zita rekambani] anoshanda kuzvibvumirano zvedu zvese'. Kana iwe ukabata nemhando dzakasiyana dzekutenga, semuenzaniso zvese kutengwa kwezvinhu uye kubvumirana kwebasa, uye iwe uchishanda nemamiriro akasiyana akasarudzika, iwe unofanirwa zvakare kuratidza zvakajeka mamiriro ezvinhu aunoti anoshanda.
Kechipiri, ako ega mamiriro ekutenga anofanirwa kugamuchirwa neako wekutengesa bato. Mamiriro akanaka ndeokuti izvi zvinoitwa nekunyora, asi izvi hazvidiwe kuti mamiriro acho ashande. Mamiriro acho anogona zvakare kugamuchirwa zvinyoronyoro, semuenzaniso, nekuti mutengesi haana kuratidzira achipesana nekuziviswa kwekushanda kwemamiriro ako ekutenga zvakanyanya uye ndokuzopinda muchibvumirano newe.
Chekupedzisira, mushandisi wezvese mamiriro ekutenga, kureva kuti iwe semutengi, uve neruzivo ruzivo (Chikamu 6: 233 pasi pe b yeDutch Civil Code). Ichi chisungo chinozadzikiswa kana zvimiro zvekutenga zvakawandisa zvakapihwa kumutengesi zvisati zvaitika kana pakupera kwechibvumirano. Kana uchipa mamiriro akajairika ekutenga zvisati zvaitika kana panguva yekupedzwa kwechibvumirano iri hazvigoneke zvine musoro, chisungo chekupa ruzivo chinogona kuzadzikiswa neimwe nzira. Muchiitiko ichocho zvinokwana kutaura kuti mamiriro acho anowanikwa kuti aongororwe kuhofisi yemushandisi kana kuChamber of Commerce yakaratidzirwa naiye kana kuti vakaendeswa kudare registry, uye kuti vachatumirwa pakukumbira. Chirevo ichi chinofanira kutaurwa kusati kwapera chibvumirano. Icho chokwadi chekuti kuendesa hakuna kuita zvine musoro kunogona kungofungidzirwa mune zvakasarudzika zviitiko.
Dhirivhari inogona zvakare kutora nzvimbo zvemagetsi. Mune ino kesi, izvo zvakafanana zvinodiwa zvinoshanda sekutambidza kwenyama. Pakadaro, mamiriro ekutenga anofanirwa kupihwa pamberi kana panguva yekupedzisa chibvumirano, nenzira yekuti mupi anogona kuzvichengeta uye zvinokwanisika kuti zviitwe mune ramangwana. Kana zvirizvo hazvigoneke zvine musoro, mutengesi anofanira kuziviswa kusati kwapera chibvumirano apo mamiriro acho anogona kubvunzwa nemagetsi uye kuti achatumirwa nemagetsi kana neimwe nzira pakukumbira. tapota cherechedza: kana chibvumirano chisina kuitwa nemagetsi, mvumo yemutengesi inodiwa kuti mamiriro ekutenga mazhinji awanikwe nemagetsi!
Kana chisungo chekupa ruzivo chisina kuzadzikiswa, unogona kusakwanisa kukumbira chirevo mune zvakajairwa mamiriro uye mamiriro. Icho chirevo chinobva chabviswa. Mubatanidzwa mukuru haugone kukumbira kushaya basa nekuda kwekutyora chisungo chekupa ruzivo. Mumwe wacho anogona, zvakadaro, kuvimba nekunzwisisa uye kurongeka. Izvi zvinoreva kuti rimwe bato rinogona kupokana uye uye nei gadziriro mumamiriro ako ese ekutenga isingagamuchirwe nekuda kwezve zvataurwa zvataurwa.
Kana iwe ukazivisa ako akajairika mamiriro ekutenga anoshanda, zvinogona kuitika kuti mutengesi anoramba kushanda kwemamiriro ako uye achizivisa yakewo akajairwa mamiriro ekuendesa anoshanda. Aya mamiriro anonzi 'hondo yemafomu' mune zviri pamutemo jargon. MuNetherlands, mutemo mukuru ndewekuti mamiriro anotaurwa pakutanga anoshanda. Saka iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti unozivisa yako general mamiriro ekutenga anoshanda uye wovagamuchidza ivo pakutanga kwazvinogona nhanho. Mamiriro acho anogona kunzi anoshanda sekutanga panguva yekukumbira kupihwa. Kana iye mutengesi asingarambe zvakajeka mamiriro ako panguva yekupihwa, ako ega mamiriro ekutenga anoshanda. Kana iye mutengesi achisanganisira ake ega mamiriro uye zvirevo mukotesheni (kupihwa) uye achiramba zviri pachena zvako uye iwe uchibvuma kupihwa, unofanirwa zvakare kutarisa kune ako mamiriro ekutenga uye kuramba zvakajeka izvo zvemutengesi. Kana iwe ukasazviramba zvakajeka, chibvumirano chinenge chichigadziriswa icho chinoteedzerwa nemutengesi zvirevo nemamiriro ekutengesa! Saka zvakakosha kuti iwe uratidze kumutengesi kuti iwe unongoshuvira kubvumirana kana yako yekutenga mamiriro achishanda. Kuti udzikise mukana wehurukuro, zvakanakisa kuisa chokwadi chekuti mamiriro ekutenga anoshanda muchibvumirano chaicho.
Chibvumirano chepasi rose
Izvi zviri pamusoro zvinogona kusashanda kana paine chibvumirano chekutengesa pasirese. Muchiitiko ichocho dare rinogona kufanira kutarisa kuVienna Sales Convention. Mukokorodzano iyoyo 'kugogodza mutemo' unoshanda. Mutemo mukuru ndewekuti kondirakiti inopedzwa uye izvo zvinopihwa mumitemo nemamiriro zvakabvumiranwa kuita chikamu chechibvumirano. Zvipiwa zvemamiriro ese ari maviri kuti kukakavara hakuite chikamu chechibvumirano. Mapato saka anofanirwa kuita gadziriro nezve izvo zvinopesana.
Rusununguko rwechibvumirano nezvirambidzo
Mutemo wechibvumirano unotongwa nemutemo werusununguko rwechibvumirano. Izvi zvinoreva kuti hausati wakasununguka chete kusarudza mutengesi waunopinda naye muchibvumirano, asiwo izvo chaizvo zvaunobvumirana nazvo. Zvisinei, hazvisi zvese zvinogona kuiswa pasi mumamiriro ezvinhu pasina muganho. Mutemo unotaurawo kuti uye kana mamiriro akajairika anogona 'kusashanda'. Nenzira iyi vatengi vanowedzerwa kudzivirirwa. Dzimwe nguva vanamuzvinabhizimusi vanogona zvakare kukumbira mitemo yekudzivirira. Izvi zvinonzi reflex chiito. Izvi zvinowanzo kuve zvidiki zvipikisa. Aya ndiwo, semuenzaniso, vanhu chaivo vanoita mukurovedza kwebasa kana bhizinesi, senge mubiki wemuno. Zvinoenderana nemamiriro ezvinhu chaiwo kuti bato rakadai rinogona kuvimba nemitemo yekudzivirira. Sebato rekutenga haufanire kufunga izvi mumamiriro ako akajairika, nekuti rimwe bato rinogara riri bato risingakwanise kukwidza kumitemo yekuchengetedza vatengi. Iyo imwe bato inowanzo iri pati inotengesa / kununura kana kupa masevhisi kazhinji. Kana iwe ukaita bhizinesi ne 'isina kusimba bato' zvibvumirano zvakasiyana zvinogona kuitwa. Kana iwe ukasarudza kushandisa ako akajairika mamiriro ekutenga, iwe unomhanyisa njodzi yekuti haugone kuvimba nechimwe chirevo mune zvakajairika mamiriro nekuti, semuenzaniso, zvakabvisirwa newawakabatana naye.
Mutemo zvakare une zvirambidzo parusununguko rwechibvumirano chinoshanda kune wese munhu. Semuenzaniso, zvibvumirano pakati pemapato zvinogona kunge zvisinga pesane nemutemo kana runyararo rwevanhu, zvikasadaro hazvibatsiri. Izvi zvinoshanda zvese kurongwa muchibvumirano chaicho uye nezvipo mune zvakajairwa mamiriro uye mamiriro. Pamusoro pezvo, mazwi anogona kushayiswa simba kana asingagamuchirwe zvinoenderana nematanho ekunzwisisa nekuenzanisira. Nekuda kwerusununguko rwambotaurwa rwechibvumirano uye mutemo wekuti zvibvumirano zvakaitwa zvinofanirwa kuitwa, mwero wataurwa unofanirwa kushandiswa nekuzvidzora. Kana iko kushandiswa kwetemu iri kubvunzwa kusingagamuchirwe, kunogona kubviswa. Yese mamiriro ezvinhu enyaya yakatarwa anoita basa mukuwongorora.
Ndeapi misoro yakafukidzwa mune zvakajairwa mazwi uye mamiriro?
Mune zvakajairwa mamiriro uye mamiriro iwe unogona kutarisira chero mamiriro ezvinhu aunogona kuzviwana urimo. Kana gadziriro isinga shande mune yakatarwa nyaya, mapato anogona kubvumirana kuti iyi gadziriro - uye chero zvimwe zvipi nezvipi - zvichasiiwa. Izvo zvakare zvinokwanisika kuita akasiyana kana mamwe marongero akasarudzika muchibvumirano chaicho kupfuura mune zvakajairwa mazwi uye mamiriro. Pazasi pane dzinoverengeka misoro inogona kugadziriswa mumamiriro ako ekutenga.
Chekutanga pane zvese, zvinobatsira kuisa rondedzero yedudziro mune akajairika mamiriro ekutenga. Iyi rondedzero inotsanangura akakosha mazwi anodzokazve mumamiriro acho.
Mhosva inyaya inoda kugadziriswa zvakanaka. Mukudaro, iwe unoda iyo imwecheteyo chikwereti scheme kuti ishandise kune ese chibvumirano. Iwe unoda kusabvisa yako wega mutoro zvakanyanya sezvinobvira. Saka ichi inyaya yekugadziriswa pamberi pamberi peyakajairika mamiriro ekutenga.
Chirongwa pazvivakwa zvehungwaru chinofanirawo kuverengerwa mune mamwe maitiro nemamiriro. Kana iwe uchigara uchipa vavaki dhizaini dhizaini yekuvaka uye / kana makondirakiti kuendesa mamwe mabasa, iwe uchazoda mhedzisiro yekupedzisira ive yako chivakwa. Mukudaro, mugadziri, semugadziri, ane kodzero yemifananidzo. Mumamiriro akajairwa, semuenzaniso, zvinogona kutaurwa kuti mugadziri anoendesa wega kana kupa mvumo yekuti shanduko dziitwe.
Kana uchitaurirana neimwe bato kana kana uchiita kutenga chaiko, (bhizinesi) ruzivo rwakanyanya runowanzo govanwa. Saka zvakakosha kuti ubatanidze chirongwa mune zvakajairwa mamiriro uye mamiriro anovimbisa kuti mumwe wako haakwanise kushandisa zvakavanzika ruzivo (saizvozvowo).
Kana iwe ukatenga zvigadzirwa kana kutumira komiti kuti ipe masevhisi, iwe zvakasununguka unoda kuti rimwe bato rivimbise humwe hunhu kana mhedzisiro.
Mutemo unoshanda & mutongi anokwanisa
Kana kontrakiti yako iri muNetherlands uye kuunzwa kwezvinhu nemasevhisi zvikaitikawo muNetherlands, gadziriro pamutemo unoshanda muchibvumirano inogona kuita kunge isingakoshe. Nekudaro, kuitira kudzivirira mamiriro asingafanoonekwi, izano rakanaka kugara uchisanganisira mune ako akajairwa mamiriro uye mamiriro iwo mutemo waunoti unoshanda. Uye zvakare, iwe unogona kuratidza mune akajairwa mamiriro uye mamiriro uko kudare chero gakava rinofanira kuendeswa.
Rondedzero iri pamusoro haina kukwana. Iko kune zvekare zvimwe zvakawanda zvidzidzo zvinogona kugadziriswa mune zvakajairika mamiriro uye mamiriro. Izvi zvakare zvinoenderana nerudzi rwekambani uye chikamu chairi kushanda. Nenzira yekufananidza, isu tinopinda mune akati wandei mienzaniso yezvidzidzo izvo zvinonakidza kune zvakajairika mamiriro ekutenga muchiitiko chekubvumirana kwebasa.
Kana iwe semukuru kana kontrakta uchibata (sub) kondirakiti kuti aite basa rezvinhu, saka unowira pasi pechidziro chechisungo checheni. Izvi zvinoreva kuti iwe unosungirwa kubhadhara mitero yemubhadharo neako (sub) kontrakta. Kubhadhara mutero uye zvipo zvekuchengetedzwa kwevanhu zvinotsanangurwa semitero yemubhadharo uye mipiro yekuchengetedza vanhu. Kana kontrakita wako kana kontrakita asingateerane nezvisungo zvekubhadhara, Mutero uye Tsika Dzekutonga dzinogona kukupa mhosva. Kuti udzivise chikwereti zvakanyanya sezvinobvira uye kudzikisa njodzi, iwe unofanirwa kuita zvimwe zvibvumirano neako (sub) kontrakta. Izvi zvinogona kuiswa pasi mune akajairwa mazwi uye mamiriro.
Semuenzaniso, semukuru wechikoro unogona kubvumirana nekontrakta yako kuti asati atanga basa anozoongorora mamiriro ezvinhu panzvimbo iyi ozokuzivisa kana paine chero zvikanganiso mugove. Izvi zvakabvumiranwa kudzivirira kontrakta kubva pakuita basa zvisina basa uye zvinomanikidza kontrakta kufunga pamwe newe. Nenzira iyi, chero kukuvara kunogona kudzivirirwa.
Nezvikonzero zvekuchengetedza, iwe unoda kumanikidza zvinodiwa pane hunhu hweanoshanda uye vashandi vekontrakita. Semuenzaniso, ungangoda VCA chitupa. Ichi chiitiko chakanyanyo shongedzwa nezvakajairwa mamiriro uye mamiriro.
Sawe muzvinabhizimusi iwe ungangoda kuzivisa iyo Uniform Administrative Mitemo uye Mamiriro ekuitwa kweMabasa neTechnical Kuisa Mabasa 2012 anoshanda kune hukama neumwe mubato. Muchiitiko ichocho zvakare zvakakosha kuti vazivise kuti zvinoshanda mune zvakajairika mamiriro ekutenga. Uye zvakare, chero kutsauka kubva kuUAV 2012 kunofanirawo kuratidzwa zvakajeka.
The Law & More magweta anobatsira vese vatengi nevatengesi. Iwe unoda kuziva chaizvo izvo zvakajairwa mazwi uye mamiriro ari? Magweta kubva Law & More inogona kukuraira pane izvi. Ivo vanogona zvakare kugadzira akajairwa mazwi uye mamiriro iwe kana kuyedza zviripo.
Previous Post Kuzivikanwa uye kumanikidzwa kwekunze kutonga muNetherlands
Next Post Iyo Bankruptcy Act nemaitiro ayo